ITaiwan Ilungiselela Ukufika Kwesiphepho Esikhulu iSchanthu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZaseTaiwan » ITaiwan Ilungiselela Ukufika Kwesiphepho Esikhulu iSchanthu
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ukuphepha • Izindaba ZaseTaiwan • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Itheku laseNanfang'ao ligcwele izikebhe - isithombe ngezilokotho ze-CNA
ISuper Typhoon - uChanthu - yenzela iTaiwan ingozi futhi kulindeleke ukuthi ishaye ngqo eTaipei kusasa, ngoMgqibelo, Septhemba 11, 2021.
ISuppon enkulu njengamanje inomoya ophakeme kakhulu we-180 mph okwenza kube yisiphepho sesigaba 5.
Indlela yeChanthu iyisa ngqo eTaiwan nasedolobheni laseTaipei.
Iziphepho zase-Atlhough zivamile ezweni, kulindeleke ukuthi lesi siphepho silethe umoya omkhulu nemvula, kudale izikhukhula ezinkulu kanye nokuwa komhlaba okungahle kube khona.
I-Chanthu inamandla amakhulu ngemimoya ephezulu eqinile ye-180 mph, okwenza kube yisiphepho sesigaba sesi-5 esiyingozi. Izazi zeMeterologist zibuke ngokucophelela iSuppon Chanthu ikakhulukazi ngoba ayigcinanga nje ngokuphelelwa amandla kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule, empeleni ziyaqina.
Izibikezelo zibikezela ukuthi uChanthu uzobuthaka abe yisiphepho sesigaba 4 ngaphambi kokuthi kufike eningizimu yeTaiwan. Isiphepho sesigaba 4. Ngesikhathi isiphepho sidlula eduze kwedolobha laseTaipei, kulindeleke ukuthi sehliselwe esigungwini sesigaba 2.
ISuppon Typhoon Chanthu izoletha imimoya enamandla nemvula enamandla kuzo zonke izigaba, kusuka ku-5 kuye ku-2. Iziphepho ziyingxenye yenkambiso eTaiwan, kodwa-ke, uChanthu uthatha indlela engajwayelekile ethatha lesi sifunda enethuba lokukhuphuka kwamathuba amaningi umonakalo. Izimvula ezinamandla kungenzeka zidale izikhukhula futhi mhlawumbe nokudilika komhlaba.
Esikhathini sezinsuku ezi-2 nje kuphela, imimoya eqhubekayo ikhule ngo-130 mph. Zingu-5 kuphela ezinye izivunguvungu eziqophe umfutho oshesha kangaka, zisuka nje ekucindezelekeni ziye esigabeni sesi-5 ngesikhathi esifushane kakhulu, kusho uSam Lillo, isazi sesimo sezulu Ukuphathwa Kwezwe Lase-Oceanic ne-Atmospheric (NOAA).
Ngokusho kwe-US National Hurricane Center, ukuqina okusheshayo kuchazwa ukwanda kwemimoya enamandla kakhulu okungenani ngamamayela angama-35 ngehora kungakapheli amahora angama-24. Ezinye izithako ezibalulekile zokuqina okusheshayo kweziphepho ezishisayo zibandakanya amazinga okushisa aphezulu olwandle, okuqukethwe okushisa ngokweqile olwandle (isilinganiso samazinga okushisa kwamanzi ngaphansi komhlaba), nesheya yomoya emile mpo.
Amanzi afudumele ahambisana nomoya ofudumele oswakeme, futhi womabili anikeza amandla nomswakama obalulekile eziphephweni. I-Ventical shear shear umehluko wejubane nokuqondisa kwemimoya yezinga eliphansi neliphezulu. Ishear ephezulu idabula iziqongo ezithuthukisweni zeziphepho futhi izenze buthaka, kuyilapho i-shear ephansi ivumela izivunguvungu ukuthi zakhe.
ICentral Weather Bureau (CWB) ibikezela ukuthi njengoba isivunguvungu siqala ukungena eTaiwan, amaphethelo aso azoqala ukuthinta izwe ngoLwesihlanu kusihlwa, alethe imvula empumalanga yeTaiwan. Imvula nomoya kuzoba namandla ngoMgqibelo, lapho izimvula ezinamandla cishe zikhona empumalanga yeTaiwan, eKeelung City, naseHengchun Peninsula. I- IsiThaiese balungiselela okusemandleni abo, amabhizinisi nezikole zivaliwe ngokulindela ukufika kwesiphepho.